गगन थापाले गरे घोषणा !को को छन छायाँ सरकारमा ?काँग्रेस बाट::Nepal's Online News Portal
गगन थापाले गरे घोषणा !को को छन छायाँ सरकारमा ?काँग्रेस बाट
आइत, फाल्गुन १३, २०७४
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने हो भने अहिले भएका पुराना नेता छेउ लाग्नुपर्ने बताएका छन् । आफूहरुले शुद्धिकरणको अभियान पनि आगामी दिनमा समृद्धि नेपालको अभियानमा उभ्याउन चलाएको थापाले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्र र प्रदेशमा छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । छाया सरकारले वाम सरकारले गरेको काम कारबाहीका बारेमा निगरानी राख्ने र आवश्यक परे सल्लाह दिने र नराम्रो काम गरे, विरोध गर्ने हिसाबले कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । पार्टीभित्र शुद्धिकरणको अभियान युवा समूहले उठाइरहेको छ । यिनै विषयमा हामीले नेता थापासँग कुरा गरेका छौँ ।
० उसो भए, छाया सरकारको कन्सेप्ट नयाँ होइन ?
० सरकारलाई निगरानी गर्न हो ?
नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिका रहँदैगर्दा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन छाया सरकारको व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसले संसदको गुणस्तर बढाउँछ ।
– केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकमा यो कुरा आउँछ, त्यसपछि प्रदेशमा पनि साथीहरुले काम अगाडि बढाउनु हुन्छ । पार्टीले त्यही हिसाबले गराउँछ । प्रदेशमा जतिवटा मन्त्रालय रहन्छ, तत मन्त्रालयमा पार्टीका सांसदहरुले प्रादेशिक छाया सरकार बनाउनु हुनेछ ।
० अनि, कांग्रेसमा जागरण किन चाहियो ?